SONATA-CANTATA: March 2009
နေ့ ကို လ စားနေပေမဲ့
မင်း အပြုံးတွေ လှိုင် ပါစေ...။ ။
(မသီတာကို စာရေးဖြစ်အောင် တွန်းအားပေးခဲ့တဲ့၊ ပညာသင် ခရီးတခု ပြီးဆုံးလို့ ပြည်တော်ပြန်တော့မည့် ဘလော့ဂါ ညီမ အတွက်~)
အချုပ်အနှောင်ကို ငါမမှု။ သေမည်ကိုလည်း မစိုးရိမ်။
အကြင်သူတို့၏ မင်းဖြစ်သော ငါသည်
ထိုသူတို့၏ ချမ်းသာကို ဆောင်ပါ၏။
မြတ်စွာဘုရားသည် အလောင်းတော်ဘ၀ ပါရမီဖြည့်စဉ်အခါက ဘ၀ အမျိုးမျိုးတွင် ကျင်လည်ခဲ့ရသည်။ လူဖြစ်သည်လည်း ရှိသည်။ တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သည်လည်း ရှိသည်။ တစ်ရံမူ အလောင်းတော်သည် မျောက်ဘ၀၌ ဖြစ်လေသည်။ မျောက် ရှစ်သောင်းတို့အား ခေါင်းဆောင်ကာ ဂင်္ဂါမြစ် ကမ်းနဖူးရှိ အလွန် အရိပ်အာဝါသ ကောင်းသည့် သရက်ပင်တစ်မျိုးတွင် နေကြသည်။ ထိုအပင်မှ အသီးသည် အရွယ်ပမာဏ ကြီးမား၍ အနံ့အရသာနှင့်လည်း လွန်စွာပြည့်စုံ၏။
ရံခါတွင် အကောင်းတို့သည် အဆိုးကို လက်ယပ်ခေါ်သကဲ့သို့ ဖြစ်တတ်သည်။ ဤသရက်သီးတို့ကို အကြောင်းပြု၍ မျောက်တို့၏ ပျက်စီးရာ ဖန်လာခဲ့သည်။ ဤသရက်သီးကို အလိုရှိသော ဗြဟ္မဒတ်မင်းသည် မျောက်တို့ကိုပါ သတ်ဖြတ်ရန် လေးသမားတို့အား အပင်ကို ၀န်းရံစေသည်။ မျောက်အပေါင်းတို့သည် အလွန် ကြောက်ရွံ့ကြသည်။ မျောက်မင်းသည် သာမာန်မျောက် မဟုတ်ပဲ၊ ခွန်အားဗလ ကောင်းမွန်သော မျောက်မျိုးဖြစ်ရာ၊ ဘေးလွတ်ရာ တစ်ဖက်ကမ်း ခုန်၍ ကူးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ကိုယ်လွတ် ရုန်း၍ ပြေးလိုက ပြေးနိုင်သည်။ သို့သော် ခေါင်းဆောင်ကောင်းဟူသည် မိမိကိုယ်ကျိုးထက် နောက်လိုက်ငယ်သားတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို ဦးစား ပေးလေသည်။
အလောင်းတော်သည် မျောက်အပေါင်းတို့ကို နှစ်သိမ့်စေကာ တစ်ဖက်ကမ်းသို့ ခုန်၍ ကူးသည်။ ထို့နောက် မြစ်ကို ဖြတ်ကူးနိုင်လောက်အောင် ရှည်သော ကြိမ်နွယ်ပင်အား ရှာကာ မိမိ၏ ခါးတွင် ချည်နှောင်၏။ ထို့နောက် မျောက်တို့ရှိရာ သရက်ပင်ဆီသို့ ပြန်ကူးလာသည်။ သို့သော် နွယ်သည် အနည်းငယ်မျှတို၍နေလေရာ သရက်ပင်တွင် ချည်ကာ ကြိုးတံတားဆောက်ရန် မဖြစ်နိုင်တော့။ မိမိကိုယ်တိုင်သည်ပင် အကိုင်းဖျားတို့ကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် မိရုံမျှ မှီလေသည်။ ထိုအခါ မိမိအသက်ကိုမငဲ့ကွက်တော့ပဲ၊ မျောက်တို့အား မိမိ၏ ကျောကုန်းကို နင်းကျော်ကာ တစ်ဖက်ကမ်းသို့ အချိန်မီ ပြေးကြရန် မှာကြား၏။ မျောက်တို့လည်း မိမိတို့၏ အသက်သခင်ဖြစ်သော မျောက်မင်းအား ရှိခိုး၍ ရိုသေစွာ နင်းပြီး ကူးသွားကြသည်။ လောကတွင် ကျေးဇူး သိတတ်သူတို့ရှိသလို၊ ကျေးဇူး မဲ့တတ်သူတို့လည်း ရှိလေရာ ဒေ၀ဒတ်အလောင်း မျောက်ဆိုးသည် မိမိရန်သူ မျောက်မင်း ပျက်စီးစေရန် အခွင့်ကောင်းယူသည်။ အလောင်းတော်၏ ကျောထက်သို့ အမြင့်မှ ခုန်ချကာ ကူး၍ ပြေးသည်။ မျောက်မင်းလည်း ပြင်းစွာသော ဝေဒနာဖြစ်၍ တစ်ဦးတည်း ကျန်ရစ်လေသည်။
ထိုအဖြစ်ပျက်ကို သစ်ပင်အောက်မှ ဗြဟ္မဒတ်မင်းက စောင့်ကြည့်နေသည်။ ဗြဟ္မဒတ်မင်းသည် မျောက်တို့အား သတ်ဖြတ်မည့် ရန်သူဖြစ်သည်။ သို့သော် တိရစ္ဆာန်ပင် ဖြစ်လင့်ကစား မိမိကိုယ်ကို အနစ်နာခံ, အသေခံ၍ အများအကျိုးကို ဆောင်ရွက်သော အလောင်းတော်၏ မြင်ကွင်းက ရန်သူဗြဟ္မဒတ်မင်း၏ စိတ်နှလုံးကို သိမ်းကြုံး ယူလိုက်သည်။ မျောက်မင်းအား အပင်ထက်မှ ညင်သာစွာ ချစေ၍ အသင်သည် ထိုမျောက်တို့နှင့် မည်သို့ တော်စပ်သနည်းဟု မေး၏။
တံ မံ န တပတေ ဗန္ဓော၊ မတော မေ န တပေဿတိ။
သုခမာဟရိတံ တေသံ၊ ယေသံ ရဇ္ဇမကာရယိံ။
အထက်ပါ ဂါထာသည် မျောက်မင်း၏ အဖြေဂါထာများထဲမှ တစ်ပိုဒ်ဖြစ်သည်။ ခေါင်းဆောင်ကောင်း၊ မင်းကောင်းသည် မိမိအကျိုးစီးပွားကို မငဲ့၊ မိမိ အသက်ကိုလည်း မငဲ့။ မိမိ အုပ်စိုးသော ပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို ဆောင်ရသည်။ မိမိအား ဥပမာပြုကာ တိုင်းသူပြည်သားတို့၏ အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ရန် ဗြဟ္မဒတ်မင်းအား တရားဟောဆုံးမလျှက်ပင်၊ မျောက်မင်းသည် အသက်စွန့် သွားလေသည်။ မျောက်မင်းအား ကောင်းစွာသင်္ဂြိုဟ်၍ အရိုးပြာတို့ကို စေတီတည်ထား၏။ မျောက်မင်းဆုံးမသည့် အတိုင်း ဗြဟ္မဒတ်မင်းသည် တိုင်းပြည်အား တရားနှင့်အညီ အုပ်ချုပ်သွားသည်။ မျောက်မင်းသည် မျောက်ရှစ်သောင်းတို့၏ ခေါင်းဆောင်သာ မဟုတ်တော့။ ဗြဟ္မဒတ်မင်းနှင့် ဗာရာဏသီပြည်သူတို့၏ စံပြခေါင်းဆောင် ဟုလည်း ဆိုရပေမည်။
စာညွှန်း။ သတ္တကနိပါတ်၊ ဂန္ဓာရ၀ဂ်၊ မဟာကပိဇာတ် (ဇ-၄၀၇)
Labels: စကားပြေ, ဇာတက, ဧရာ
မသီတာလေ ဘလော့လေးလုပ်ပြီး စာတွေလည်းရေးရ။ ဘလော့မိတ်ဆွေတွေဆီ CBox မှာနှုတ်ဆက်လိုက်။ ပို့စ်တွေ ဖတ်လိုက်၊ ကော်မန့်တွေ ရေးလိုက်နဲ့ စိတ်ချမ်းသာပါတယ်။
ဘလော့ဂင်းရင်းနဲ့ သတိထားမိတဲ့ အချက်လေးတွေ ချရေးလိုက်ပါတယ်။
မသီတာလည်း (မကြီးမငယ်ပေမဲ့) ဘလော့ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာတော့ လူကြီးနေရာပဲ နေချင်ခဲ့တာပေါ့…။ အို.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. လူငယ်တွေ စာရေးဖြစ်အောင် တဖက်တလမ်းက တွန်းအားပေးတဲ့ အနေနဲ့ ဒီလောကထဲ ငါရှိနေမယ်…။ (အမယ် လာတာ လာတာ… ကံကောင်းလို့ အောက်ခြေမလွတ်တယ်)…။ အမှန်တကယ်က လူငယ်တွေဆီက အားတွေယူဖို့ ဒီလောကထဲမှာ မသီတာ ရှိနေတာ…။
အပြင်လောကမှာ မသီတာရော ကိုဧရာပါ အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေ နည်းပါတယ်။ မသီတာတို့ရဲ့ မနွေးထွေးတတ်တဲ့ ချို့ယွင်းချက်ကြောင့်ပါ။ အနားမှာ ရှိတဲ့သူကို မသက်မသာ မလုံမလဲ ဖြစ်စေတဲ့ ခံစားမှုမျိုး ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ မွေးရာပါ ဒီဗီဇဆိုးကို သတိထားမိလာတယ်။ လိုနေတာ သင်္ဂါရ ရသပါတဲ့ရှင်…။
ကိုယ်ကိုတိုင်က အမျိုးသမီးဖြစ်နေလေတော့ ဘလော့ဂါ အမျိုးသမီးတွေကို ပိုပြီး နားလည် နှစ်သက် စွဲလန်းမိတယ်။ ငါဘာကြောင့် မိန်းမဖြစ်နေရတာလဲ ဆိုတဲ့ ဂွကျကျမေးခွန်းရဲ့ အဖြေကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရသွားပြီ ဆိုပါတော့။ နောင်ဘ၀များရှိခဲ့ရင် မ,ဆိုတဲ့သတ္တ၀ါ မဖြစ်ပါရစေနဲ့တော့လို့ တောင်းခဲ့တဲ့ဆုကိုတောင် ယောင်ရမ်းပြီး တောင်းခဲ့တာမှန်း သေချာသွားပြီ…။
sonata-cantataရဲ့ နောက်ကွယ်က မပါမဖြစ်တဲ့ ကိုဧရာကြီးနဲ့မသီတာ တို့ရဲ့ ဒီပို့စ်မတင်ရဘူး၊ သည်စာသား မထည့်ရဘူး၊ သူကလက်နဲ့ရေးရင် ကိုယ်ကပါးစပ်နဲ့ ဖျက်၊ ကိုယ်က နှလုံးသားနဲ့ရေးရင် သူကဦးနှောက်နဲ့ ဖျက် စတဲ့ စတဲ့ ၀ိရောဓိလေးတွေ… ။ အလွန် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်…။
သင်ခဲ့ဖူးတဲ့ လူနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တို့၏ အညမည သဘောတရားဆိုတာ… မသီတာသည် ဘလော့လောကနဲ့ ပရလောက အဲလေ ယောင်လို့ ပြင်ပလောက၌ စီးမျောနေသည်ဆိုဆို နစ်မြုပ်နေသည်ပဲပြောပြော အညမညတွေက ပေးလိုက်တဲ့ အသိတရားကတော့ ကိုယ်နဲ့ ကိုယ်မှလွဲသော အခြား၊ မ နဲ့ မ မှကြွင်းသော အကျန် (အကြွင်း အကျန် ဆိုတော့ ကောင်းသေးပါဘူး… ဒီအတိုင်းပဲထားလိုက်ပါ နားလည်ပါတယ်နော့)၊ လူနဲ့ လူမဟုတ်သော သတ္တ၀ါ အားလုံးကို ပိုမိုနားလည် တန်ဖိုးထားတတ်လာခြင်းပါ… ။
ပန်းလေးတွေက အလှကိုယ်စီ ရှိကြတယ် မဟုတ်လား…။ နူးညံပြီး ချစ်စရာလည်း ကောင်းကြပြန်သေးတယ်…။
မိန်းကလေးတွေကို ပန်းလေးတွေနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းတင်စားတာတော့ ပနံရလှတယ်လို့ ထင်မိပါရဲ့။
ဖူးရာမှငုံ၊ ငုံရာမှပွင့်၊ ပွင့်ရာမှနွမ်း၊ နွမ်းရာမှ ခြောက်၊ ခြောက်ရာမှကြွေ… သဘာဝတရားတွေကို ဖြတ်သန်းလာကြတာ အဆင့်တိုင်းရဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ ဘယ်လိုအားမာန် ဘယ်လိုသတ္တိတွေနဲ့များ ကျော်လွှားခဲ့ကြပါလေသလဲ ပန်းမမတို့ရေ…။
ကျမတို့ မိန်းကလေးတွေမှာဖြင့် အပျိုဖော်ဝင်လို့ ဓမ္မတာရာသီလာချိန် ရောက်ပြီဆိုကတည်းက ‘မ’ မို့တဲ့ အပိုဆောင်းပေးလိုက်တဲ့ ဒုက္ခတွေ… ။
ဗိုက်ကိုက်ရပါတယ် ( လူတိုင်းသိတဲ့ ဗိုက်နာတာ မဟုတ်။ ဗိုက်အောင့်တာ မဟုတ်။) ခေါင်းကိုက်ရပါတယ်။ ပျို့အန်ချင်ပါတယ်။ မတည့်စာတွေတဲ့ ရှောင်ရပါသေးတယ်။ ဘာမှတ်နေသလဲ သေတတ်တယ် တဲ့။ ခြေမသယ်ချင် လက်မသယ်ချင်ပေမဲ့လည်း ကိုယ်ခံစားနေရတာတွေ လူသိမခံရဘူးတဲ့ ရှက်စရာ သိုပါဟဲ့ ၀ှက်ပါဟဲ့…။ ဒီဝက်ခြံတွေကလည်း ပြူးနေအောင် တလုံးပြီးတလုံး အပြိုင်အဆိုင်များထွက်နေကြသလားမသိ…။ ခက်လိုက်တာနော် အဲ..အချိန်တန်လို့မှ သူမလာပြန်ရင်လည်း တဒုက္ခ။ ဒင်းတို့က ထွက်မလာကြပဲ ဗိုက်ထဲမှာ အအုပ်အသင်းဖွဲ့လို့ အဖုပဲ ဖြစ်နေကြပလား အကျိတ်ပဲ ဖြစ်နေကြပလား…။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ သားအိမ်ထုတ်ရပြီ ဆိုရင်တော့ အမလေးလေး ရင်မောရပါတယ်နော်။ ဒီလ မလာသေးဘူး … မပြောရဲ မပြောရဲပေါင်တော်။ တောင်ထင် မြောက်ထင်နဲ့ ကုတ်ကမြင်း ဆိုတဲ့ အသည်းခိုက်အောင်နာရမဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဆိုးကို သယ်ဆောင်လာတဲ့ ဝေါဟာရမျိုး နားဝနဲ့ ကြားရဖို့ မဆိုထားနဲ့ အရိပ်အခြေတောင် မမြင်ချင်ပါဘူး။
လင်ယူလို့ သားမွေးရပြန်ပါပြီ…။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စ ဟိုဟာမစားချင် ဒီဟာမစားချင် စားဖို့မပြောပါနဲ့ အနံ့တောင်မခံချင်ပါဘူး။ ခေါင်းထဲကလည်း မူးလိုက်တာ ပျို့လိုက် အန်လိုက်…။ ဗိုက်ကြီးပူနေတာ လှလို့လားလို့။ လှတာမလှတာတွေ အသာထားဦး…။ ချွေတွေက တကိုယ်လုံး နစ်နေအောင် ထွက်ပြန်ပြီ…။ ပူလိုက်တာ ပူလိုက်တာ…။ နေရင်းထိုင်ရင်း ချမ်းပြန်ပြီဟဲ့ စောင်ခြုံလို့လည်း မလုံ။ ကလေးတိုးလို့… ကန်ပါစေ ထိုးပါစေ ကိုယ်မအိပ်ရတာ ဘာအရေးလဲ ကလေးက ကျန်းမာလို့ပဲဟာ။ သူမလှုပ်မှ ဒုက္ခ...။
အချိန်တန်တော့ မွေးရပါပြီတဲ့ မိန်းမတိုင်းမွေးလို့ ရတာပဲလို့ လွယ်လွယ်လေးမထင်ကြပါနဲ့။ ကလေးက အနေအထားမမှန်၊ အချင်းကပ်လို့ သွေးသွန်တယ် ဆိုတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာရင်တော့ ရှုပ်ထွေးလာပါပြီ။ အသက် အန္တရာယ်နဲ့ ရင်ဆိုင်ကြရတာပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တုန်းမှာမှ ဖြစ်တဲ့ ဆီးချိုဆိုတာလည်း ရှိသေးသနော်။ ဖွားခါနီး သွေးပေါင်ချိန်တွေ တိုးနေပြီ ဆိုရင်တော့…။ ယောက်ျားတွေ ဖောင်မစီးချင်ရင် ရကောင်းရနိုင်ပေမဲ့ သားဖွားတဲ့ မိန်းမကတော့ မီးမနေလို့ ရပါ့မလား။
သားသမီး မထွန်းကားနိုင်ပြန်ပါဘူးတဲ့… ရင်ထဲက ကျိတ်ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာတွေ…။ ကံတရားကိုလည်း အပြစ်ပုံမချတော့ပါဘူး …။ ရရာ ရကြောင်း ခေတ်မီနည်းစနစ်တွေနဲ့ ငွေကုန်ပါစေ လူပန်းပါစေ…။
ဒီလိုနဲ့ တရွေ့ရွေ့ လေးဆယ်နားနီးရုံ ရှိသေး…။ လှချင်ပါတယ်လို့ တဆွေလုံး တမျိုးလုံး ကြွေးကြော်လာရက်နဲ့ တို့များကျမှ ရက်ရက်စက်စက် ကွက်ပြီးတော့ ထွက်ရက်ပလေ မျက်နှာပေါ်မှာမှ အမဲကွက်တွေ။ ဖုံးမရ ဖိမရ ဒီတင်းတိတ်နဲ့ မှဲ့ခြောက်တွေ။ ဘာလို့ပါလိမ့်… ဘာကြောင့်များပါလိမ့်… တားဆေးတွေကြောင့်လား… (ဆရာဝန် သောက်ခိုင်းတဲ့ ဆေးတွေကြောင့်လား)။ အကြောတွေကလည်း တက်လိုက်တာ…။ သားကြောဖြတ်ထားလို့များလား… (စကုတ်နဲ့ ကြည့်တုန်းက ဘာတွေများထိခိုက်သွားပါလိမ့်)…။
လာကတည်းက မအီမလည် ဒီဧည့်သည်… မလာချင်ပြန်ဘူး ဆိုတော့လည်း ဘယ်လာ သက်သက်သာသာ ဟုတ်ပါ့မလဲ။ ငိုချင်အောင် လုပ်လိုက်၊ ရယ်ချင်အောင်လုပ်လိုက်၊ အိပ်မပျော် စားမ၀င်၊ စိတ်တွေညစ်ငြူး၊ ဖျားတာလည်း မဟုတ် နာတာလည်း မဟုတ်။ တရှောင်ရှောင်နဲ့ အမူပိုနေတယ်မထင်နဲ့။ ချိမသွားရင်ပဲ ကျေးဇူးတင်…။ ရှင်တို့ထက် သာတဲ့ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့ နေရာတွေ တကိုယ်လုံးမှာ တပွေ့တပိုက်ပါရှင့်…။
အူက ယောက်ျားတွေထက် ပိုတိုနေလို့ ဆိုလား… ရက်ရက်စက်စက် တွယ်ကြပြန်သေးတယ် “အူတိုမျိုး” တဲ့။ တိုရုံမက ပုတ်ပါပုတ်နေသယောင် သတ်မှတ်ထားကြတာ မသိဘူးများ မှတ်နေသလား။ သားအိမ် တခုလုံး အပို ပါတာတော့ ချီးမွမ်းဖို့ရာကျ မပွင့်တပွင့်။ ဒါတွေက မိန်းမတိုင်းဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူးကွာ ဖြစ်ချင်တဲ့သူမှ ဖြစ်တာပါတဲ့…။
အစမှ အဆုံးတိုင် တို့များမတော့ သည်းခံရပါတယ်ကွယ်တို့ …သည်းခံခြင်းသည်သာ လက်ကိုင်တရား။ သည်းခံခြင်းဖြင့်သာ အောင်နိုင်ရာ…။
(ထိုထို သဘာဝက ပေးအပ်ထားသော ဘေးဒုက္ခအန္တရာယ်အပေါင်းနှင့် မိန်းမသားများကို စာနာ နားလည် ညှာတာ ထောက်ထား တန်ဖိုးထားတတ်ပါသော ပန်းချစ်သူများကို လေးစားသမှု အစဉ်ပြုလျက်~)
ကိုဧရာ့ညီက သူ့တူဖြစ်သူ ရေချမ်းအတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် (၂၀၀၅ခုနှစ်က) ကွန်ပြူတာနဲ့ ဖန်တီးပေးထားတဲ့ လက်ရာလေးပါ။ အခု ရေချမ်းမွေးနေ့ မရောက်သေးပေမဲ့-
ဘလော့ပေါ်က မိတ်ဆွေတွေကို ဧရာသီတာမှ မွေးနေ့လက်ဆောင်မွန် အဖြစ် ထပ်ဆင့်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
ကျမ English Course ဆက်တက်နေတုန်းပါ သင်တန်းမပြီးသေးပါဘူး။ တာထွက်ကောင်းပေမဲ့ အဖျားရှူးတတ်တဲ့ အလေ့ရှိသူမို့ သင်တန်းအကြောင်း ပို့စ်ရေးဖြစ်ဖို့ မဆိုထားနဲ့ ခေါင်းထဲတောင် အရောက်အပေါက် နည်းနေပါပြီ။ သင်တန်းကပဲ တ၀က်ကျိုးလာလို့ပဲလား။ ဒါမှမဟုတ် ဆရာ အပြောင်းအလဲတွေကြောင့်ပဲလား…။
English Course Day 1 Day2Day 3&4 Day 5
သင်တန်း ၅ပတ်- အကြိမ်အားဖြင့် ၁၀ ကြိမ် အပြီးမှာ ကျမတို့ကို သင်တဲ့ ဆရာတွေ အပြောင်းအလဲ လုပ်ပါတယ်။ ဟိုဘက်အတန်းသင်နေတဲ့ ဆရာတွေနဲ့ ကျမတို့ အတန်းကို သင်နေတဲ့ ဆရာတွေ switch လုပ်ပါတယ်။ ပထမအသုတ်မှာတော့ အားလုံးက ဆရာမတွေ ဖြစ်ကြပြီး အခုအသုတ်မှာတော့ Vinod Sabnani ဆိုတဲ့ ခပ်ငယ်ငယ် ဆရာတစ်ယောက်ပါလာတယ်။ နာမည်ကြည့်ပြီး ဘာလူမျိုးလည်း ဆိုတာ ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ နောက်ကျမ မိတ်ဆက်ပေးပြီးဖြစ်တဲ့ ဆရာမ ၀၀ကြီး Miranda။ နောက် country styleတွေ ၀တ်တတ်တဲ့ Nadja Pizzo။ တရုတ်လူမျိုးပေမဲ့ Pronunciation တော်တော်လေးပီသတဲ့ ကလေးတွေကို စပြတဲ့ ဆရာမနဲ့ တူတဲ့ Joanne နဲ့ အခုချိန်ထိ ကျမ နာမည် မသိသေးတဲ့ တရုတ်လူမျိုး ဆရာမ ဆိုပြီး ငါးယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာ ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကိုရော၊ တပည့်တွေကိုပါ လျှော့မတွက်ဖို့ လိုပါတယ်။ အရှေ့ထွက်နေတဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်ဝန်းဟာ နွေးထွေးဖို့ လိုတယ်။ အခြေခံအားဖြင့် ရိုးသားမှုကို ပေါ်လွင်နေဖို့လိုပါတယ်။ ဆရာတစ်ယောက် ဘာတွေကို ပြောပြီး၊ ဘယ်လို အမူအယာတွေ လှုပ်ရှားနေတယ် ဆိုတာ အသာထားလို့ အသံနေအသံထား, မျက်ဝန်းအကြည့်တို့နဲ့တင် တပည့်ရဲ့ အာရုံကို သင်ခန်းစာနဲ့ သက်ဆိုင်စွာ နေစေမလား၊ အဝေးကို လွှင့်ထုတ်ထားစေမလားဆိုတာ တတ်နိုင်ပါတယ်။ (ကျမရဲ့ အမြင်တွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။)
အမည်မသိဆရာမရဲ့ စာသင်ချိန်မှာပါ။ ဆရာမက လူတွေရဲ့ ရုပ်ပုံလေးတွေ ထောင်ထောင်ပြပြီး သူတို့ အပြင်အဆင်ကြည့်ပြီး ကျမတို့က Doctor, Soldier, Teacher စသဖြင့် ပေါ့လေ… Occupation တွေကို ပြောရပါတယ်။ နောက် ဆရာမက လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ လူတွေအများကြီးပါတဲ့ ရုပ်ပုံ အကြီးကြီးပေးပြီး Occupation တွေရေးထားတဲ့ label လေးတွေ လိုက်ကပ်ခိုင်းပါတယ်။ ကျမ စိတ်ထဲကနေ “Occupation… what people do” လို့ ပြောနေမိပါတယ်။ ဒီမှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက label တွေမှာ mother, father, parent ဆိုတာတွေ ပါလာတာပါပဲ။ တသက်နဲ့ တစ်ကိုယ် mother ဆိုတာ Occupation လို့ တစ်ခါမှ မကြားခဲ့ဖူးပါဘူး။ သွက်သွက်လက်လက်ရှိတဲ့ အိန္ဒိယကျောင်းသူ Aakansha က “what! mother; we all are working 24hraday without pay” ဆိုပြီး mother ဆိုတာ Occupation အဖြစ် သူမ ဘယ်လို အကြောင်းကြောင့် သတ်မှတ်ရပါမလဲ ဆိုတာကို ဆရာမနဲ့ အခြေအတင် ငြင်းပါတယ်။ Aakansha အသံက ၀ဲဝဲ။ ဆရာမ အသံက လုံးလုံး။ သူတို့ ဘာတွေပြောနေကြမှန်း ကျမ နားမလည်ခဲ့ပါဘူး။ Mother ဆိုတာ Occupation မှန်း ကျမလည်း မရှင်းမရှင်းပေမဲ့ ၀ဲဝဲလုံးလုံးနဲ့ပဲ အိမ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ (အောင်မယ် ငါက အလုပ်နဲ့ အကိုင်နဲ့ ဆိုပြီး စိတ်ထဲမှာ ပျော်သလိုလိုတော့ ဖြစ်သား ဒါပေမဲ့ မတင်မကျကြီးပါလေ။)
နောက်တော့မှ ကိုယ့်ဘာသာစကားနဲ့ပြောလို့ရတဲ့ ဆရာကို မရှင်းတာလေး မေးမိတော့…
“Occupation ဆိုတာ ဘာလဲ။ ဘုန်းကြီးတွေမှာ Occupation ရှိလား” တဲ့ ပြန်မေးပါလေရော။
သိသလောက်လေး မရဲတရဲ ခပ်တိုးတိုးပြန်ဖြေပါတယ် “Religious Adviser” ပေါ့ (ဘာတွေရှိသေးလည်းလို့လဲ ဦးနှောက်သေးသေးလေးကို ဖျစ်နေ ညှစ်နေတုန်း…)
“ပြောဖူးသားပဲ။ ပိုက်ဆံရမှ အလုပ် မဟုတ်ပါဘူး ဆိုတာ။ သွား… ဟိုတစ်ခါ ဖတ်ခိုင်းထားတဲ့ Siddhatha စာအုပ်သွားယူ။ ဖတ်ခိုင်းရင် မဖတ်ဘူး။”
သူ့ဖာသာ စာအုပ်ကို ယူလာပြီး ဖတ်ခိုင်းတဲ့ စာမျက်နှာက
ဂျာမန် စာရေးဆရာ Hermann Hesse ရေးတဲ့ Siddhatha (သိဒ္ဓတ္ထ- ဆရာပါရဂူ မြန်မာဘာသာပြန်ဖူးပါတယ်) မှ သမဏတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ Siddhartha နဲ့ ကုန်သည် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Kamaswami တို့ အပြန်အလှန် စကားပြောခန်းပါ။
“I possess nothing” said Siddhartha, “if that is what you mean. I am certainly without possessions, but of my own free will, so I am not in need.”
“But how will you live if you are without possessions?”
“I have never thought about it, sir. I have been without possessions for nearly three years and I have never thought on what I should live.”
“So you have lived on the possessions of others?”
“Apparently. The merchant also lives on the possessions of others.”
“Well spoken, but he does not take from others for nothing, he gives his goods in exchang.”
“Ah, but if you are without possessions , how can you give?”
“Everyone give what he has. The soldier gives strength, the merchant goods, the teacher instruction, the farmer rice, the fisherman fish.”
Mother နဲ့ Occupation, Hermann Hesse ရဲ့ Siddhartha ထဲက စကားတွေ ဘယ်လိုဆက်စပ်နေသလဲ ဆိုတာတော့ ဘလော့လာ ပရိသတ်တို့ လိုသလိုသာ တွေးသွားပါတော့။ http://dictionary.reference.com/ search box မှာ occupation လို့ ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် အရှင်းဆုံးလို့တော့ မပြောပါနဲ့နော်…
ပုံကို Visual Thesaurus မှယူပါသည်။
Labels: BC English Course, စကားပြေ, သီတာ